Semalt विशेषज्ञ: सहज साथ वेब स्क्र्यापिंग
इन्टरनेटमा जानकारीले भरिएको छ कि केहि क्लिकमा सबैको पहुँच हुनुपर्दछ। साधारण वेब स्क्र्यापिंग उपकरणहरू जाभास्क्रिप्ट गहन वेब अनुप्रयोगहरू द्वारा द्रुत रूपमा पराजित हुन्छन्। तिनीहरू अन्ततः आफ्नो आकर्षण गुमाउँछन् र कुनै चीजको लागि राम्रो छैनन्। वेब एक्स्ट्र्याक्ट नेट मा एक उत्तम डेटा स्क्र्यापिंग उपकरण हो। यो यसको उन्नत सुविधाहरू र विकल्पहरूको लागि परिचित छ। यस सफ्टवेयरले तपाईंलाई बिभिन्न वेबसाईटहरूबाट सामग्री स्क्र्याप गर्न सक्षम गर्दछ। तपाईं सजिलैसँग दुबै सरल र जटिल वेब पृष्ठहरूलाई लक्षित गर्न सक्नुहुनेछ र कुनै प्रोग्रामिंग वा कोडिंग सीपको आवश्यकता पर्दैन। अन्य साधारण उपकरणहरूको विपरीत, वेब एक्स्ट्र्याक्टले तपाईंको स्क्र्यापिंग परियोजनाहरू तुरून्त सेट अप गर्दछ। यसको मतलव तपाईले उच्च सामग्रीमा आफ्नो सामग्री स collect्कलन गर्न, व्यवस्थित गर्न, स्क्र्याप गर्न र बचत गर्न सक्नुहुन्छ र एकै साथ धेरै डेटा स्क्र्यापिंग कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो सजिलैसँग विभिन्न वेबसाइटहरू मार्फत नेभिगेट गर्न सक्दछ र अनन्त स्क्रोल, ट्याबहरू, र पप-अपहरूको साथ साइटहरू ह्याण्डल गर्दछ।
१. डेटा निकासी प्रोजेक्टहरू सिर्जना गर्नुहोस्:
वेब एक्स्ट्र्याक्टको साथ, तपाईं कुनै साइटमा कुनै समय बिना नै स्क्र्याप गर्न सक्नुहुनेछ। वेब एक्स्ट्र्यासन सुरूवात गर्न तपाईलाई लामो प्रक्रियाबाट पार गर्नु पर्दैन। यसको सट्टामा, तपाईंले केहि चरणहरू अनुसरण गर्न आवश्यक छ र तपाईंको काम पूरा गर्नु पर्छ। सबै भन्दा पहिले, तपाईले वेबसाइट यूआरएल प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ तपाईबाट डाटा स्क्र्याप गर्न चाहानुहुन्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि URL मा HTTPS समावेश छ। दोस्रो चरणको रूपमा तपाईले लक्षित कुञ्जी शब्दहरू (छोटो-पुच्छर र लामो-पुच्छल कुञ्जी शब्द) घुसाउनु पर्नेछ र त्यस अनुसार तपाईंको डाटा लोड गर्नुहोस्। वेब एक्स्ट्र्याक्टले सुनिश्चित गर्दछ कि लक्षित कुञ्जी शब्द विघ्नित छैन। तपाईं आफ्नो डाटा स्क्र्यापि task कार्यलाई अनुसूचित गर्न सक्नुहुन्छ र डाटा बचत गर्न चाहानु भएको ढाँचा छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। डाटा स्क्राप भएपछि तपाईं यसलाई वेब एक्स्ट्र्याक्सको डाटाबेसमा बचत गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको हार्ड ड्राइभमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
२. बहुविध थ्रेडहरूमा स्क्र्याप डाटा:
वेब एक्स्ट्र्याक्टको सब भन्दा विशिष्ट सुविधाहरूमध्ये एउटा यो हो कि यसले बहु थ्रेडहरूमा डाटा स्क्र्याप गर्दछ र गुणवत्ता परिणामहरू सुनिश्चित गर्दछ। तपाईं यस उपकरणको साथ एकै पटकमा विभिन्न थ्रेडहरू चलाउन र २ web वेब पृष्ठहरू मार्फत ब्राउज गर्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाईंको समय र उर्जा बचत गर्दछ र किमोनो ल्याबहरू र Import.io भन्दा राम्रो प्रदर्शन दिन्छ। पाठ स्क्र्यापि Besidesका साथै वेब एक्स्ट्र्याक्ट स्क्र्यापहरू एनिमेटेड छविहरू, अडियो र भिडियो क्लिपहरू, र PDF फाइलहरू।
Any. कुनै पनि ढाँचामा तपाईको डेटा निर्यात गर्नुहोस्:
वेब एक्स्ट्र्याक्टले धेरै ढाँचाहरू समर्थन गर्दछ र तपाईंको वेब सामग्री एक्सएमएल, एचटीएमएल, पहुँच, एसक्यूएल सर्भर, CSV, र MySQL मा निर्यात गर्दछ। तपाईं यसको डाटाबेसमा तपाईंको डाटा बचत गर्न सक्नुहुनेछ वा HTTP सर्वरमा सिधा बुझाउन सक्नुहुनेछ।
System. प्रणाली आवश्यकताहरू:
वेब एक्स्ट्र्याक्टको लागि सिस्टम आवश्यकताहरू विन्डोज ओएस (२०००, एक्सपी, २००,, भिस्टा, विन,, विन ..x), इन्टरनेट एक्सप्लोरर .0 .० वा माथि, र .नेट फ्रेमवर्क २.० हुन्। वेब एक्स्ट्रैक्ट स्थापनाकर्ताले यो फ्रेमवर्क स्वचालित रूपमा तपाईंको प्रणालीमा डाउनलोड गर्दछ र यसरी तपाईंको समय बचत गर्दछ।
A. राम्रो गतिमा डाटा झिक्नुहोस्:
वेब एक्स्ट्र्याक्टको प्रमुख सुविधाहरूमध्ये एउटा यो हो कि यसले राम्रो गतिमा डाटा स्क्र्याप गर्दछ। यदि तपाईं तत्काल साइटबाट सामग्री निकाल्न चाहनुहुन्छ र काम गर्न धेरै प्रोजेक्टहरू छन् भने, तपाईं यो उपकरण स्थापना र सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ। एक पटक पूर्ण सक्रिय भएपछि, वेब एक्स्ट्र्याक्टले तपाईंको वेब सामग्री कुनै समय बिना नै स्क्र्याप गर्न सुरू गर्दछ र केही मिनेटमा इच्छित परिणाम दिन्छ। यो उपकरण प्रोग्रामरहरू, वेब विकासकर्ताहरू, अनुप्रयोग विकासकर्ताहरू, वेबमास्टरहरू, फ्रीलांसरहरू, डाटा वैज्ञानिकहरू, र विद्वानहरूको लागि राम्रो छ। तपाईं यस सेवाको साथ PDF फाईलहरू र HTML कागजातहरूबाट सामग्री सहज रूपमा निकाल्न सक्नुहुनेछ।